I-Grove Fort Self Catering Farmhouse. - I-Airbnb
I-Grove Fort Self Catering Farmhouse.
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAnnette
Indawo yethu yindlu yefama evunyiweyo yeenkwenkwezi ezi-4, kufutshane neDromara Hills, iSlieve Croob Scenic Loop, iNewcastle, iCastlewellan Forest Park, iMorne Mountains, iHillsborough.
Sinembasa yesilivere yezoKhenketho oluHlaza kunye nokuvunywa koMamkeli-zindwendwe
Indawo yethu ilungele izibini, abahambi beshishini, iintsapho, izilwanyana zasekhaya, abadlali befilimu begalufa kunye nabakhweli beebhayisikile
Indawo yethu yokuhlala isemaphandleni kakhulu, kwifama esebenzayo, ivumela iindwendwe ukuba zive ubomi belizwe obunoxolo. Bamkelekile ukuba babe namava okanye bangayihoyi inkcubeko yokulima! Ngelixa sisezweni kwaye imoto iyimfuneko, sisisiseko esihle sabakhenkethi abafuna ukuhlola uninzi lwe-Northern Ireland kwaye bafikeleleka lula kuzo zombini i-Eire kunye neCauseway Coast edumileyo. Sikwiimayile ezi-6-9 kuphela ukusuka kwindlela eyi-A1 - Belfast/Dublin, sinendawo yokupaka yabucala eyaneleyo, inokubonelela ngendawo yokuhlala ekhuselekileyo yeebhayisekile, izithuthuthu, izinja eziphumelele amabhaso, nakwizilwanyana "zomboniso" ezikhulu ukuba ziyafuneka.
2 iibhedi ezilala abantu ababini, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, isofa ekwayibhedi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1
2 iibhedi ezilala abantu ababini, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, isofa ekwayibhedi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Bonisa zonke izinto eziyi-5
Indawo esihlala kuyo yindawo yeefama ebukekayo, kunye neenduli zeDromara ezikufutshane. Abantu abaninzi balapha bahamba nezinja endleleni kwaye bahlala benobubele kwaye benomdla wokudibana kunye nokuthetha neendwendwe. Kukho iigusha, iinkomo kunye namahashe ngobuninzi, singalibali idonki yethu "uFlorence" othanda i-carrot, i-apula okanye idiliya. Indlela ibalulekile kwaye ingumceli mngeni wendlela yomjikelo /i-drumlins of County Down
Umbuki zindwendwe ngu- Annette
Retired couple living next door to the accommodation
Izitshixo zinikezelwa kwibhokisi yokutshixa emnyango wendawo, ikhowudi ithunyelwa kwiindwendwe ngaphambi kokufika. Siyazamkela iindwendwe xa zifika kwaye zikhona ukuphendula imibuzo malunga nezalathiso, umtsalane wabatyeleli, iindawo zokutyela zasekuhlaleni, okanye naziphi na iingxaki ngendawo yokuhlala rhoqo okanye kancinane njengoko iindwendwe zifuna.
Izitshixo zinikezelwa kwibhokisi yokutshixa emnyango wendawo, ikhowudi ithunyelwa kwiindwendwe ngaphambi kokufika. Siyazamkela iindwendwe xa zifika kwaye zikhona ukuphendula imibuz…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dromara